पल शाह काण्ड : नायिका नम्रताले पनि दिईन कडा झटारो – Nep Stok
पल शाह काण्ड : नायिका नम्रताले पनि दिईन कडा झटारो
फागुण २३, २०७८ सोमबार 268
पल शाह प्रकरणले यतिबेला सामाजिक संजाल गर्माएको छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरा सतमा छन् । उनी हिरा सतमा गएपछि कोही पलको पक्षमा छन् भने कोही पीडित बालिकाको पक्षमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलेब्रिटीहरु खुलेर बोल्न थालेका छन् ।
उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आह्वान छन् । यसैबिच अभिनेत्री तथा मोडल नम्रता सापकोटाले पनि मुख खोलेकी छन् । उनले सामाजिक संजालमा एक पोष्ट गर्दै प्रकरणमा पीडित नाबालिग गायिका र उनको परिवारको विषयमा चिन्ता ब्यक्त गरेकी छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन् ‘के उनी ठिक छिन् ? उनी कुन हालतमा होलिन् । उनको परिवारलाई के बितिरहेको होला ?’ उनको पीडितको सुरक्षा समाज र समाजमा रहेको सबैको भएको समेत बताएकी छिन् । उनले यस बिषयमा प्रश्न गरेकी छन् ‘उनको सुरक्षा यो समाज र समाजमा बस्ने नागरिकको हैन र ?
Prevपल शाह घटनामा हरी उदासी पनि पक्राउ
Nextपल हिरासतमै भएको बेला नायिका पुजा शर्मा भने चाँडै बिवाहको तयारी गर्दै
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस १० गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
नेपाली नागरिकता लिएका यि ३ जनाको नागरिकता खारेज गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
बुटबलमा तीन जना चढेको मोटरसाइकल दु’र्घटना, दुई जनाको मृ’त्यु